निद्रा नलागे के गर्ने ? - Naya Patrika
डा. सुबोधसागर ढकाल छाती तथा निद्रारोग विशेषज्ञ नेपाल मेडिकल कलेज
निद्रा नलाग्ने समस्याले धरैलाई हैरान पारेको हुन्छ । तपार्ईं पनि यो समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने केही विषयमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
– सुत्नुभन्दा तीन घन्टाअगाडि अनिवार्य रूपमा खाना खाने ।
– सुत्नुभन्दा एक घन्टाअगाडि आफूलाई मन पर्ने गीत–संगीत सुन्ने या किताब पढ्ने ।
– निद्रा लागेपछि मात्रै ओछ्यानमा जाने, निद्रा नलाग्दै ओछ्यानमा गएर निदाउने कोसिस नगर्ने ।
– सुत्ने र उठ्ने निश्चित समय बनाउने ।
– ओछ्यानमा गएको २० देखि ३० मिनेटसम्म पनि निद्रा लागेन भने कर गरेर सुत्ने प्रयास नगर्ने ।
– ओछ्यानबाट उठेर तत्काल आफूलाई सबैभन्दा अल्छी लाग्ने काम गर्ने । यसो गर्दा ४०–४५ मिनेटपछि आफैँ निद्रा लाग्छ ।
– सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सुत्ने कोठामा टिभी राख्नु हो । सुत्ने तयारी गर्नुअघि टिभी बन्द गर्नुपर्छ ।
– सुत्नुभन्दा एक घन्टाअघि एक्सन तथा भूतको फिल्म नहेर्नु राम्रो हुन्छ ।